लगानीकर्ताले एकै दिन गुमाए १८ अर्बभन्दा बढी - Naya Patrika
लगानीकर्ताले एकै दिन गुमाए १८ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौं, १५ फागुन | फागुन १५, २०७४
साताको दोस्रो कारोबार दिन पनि नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । अघिल्लो साताको पहिलो कारोबार दिनदेखि ओरालो लाग्ने क्रममा रहेको नेप्से सोमबारसम्ममा ६६ अंक ओरालो लागिसकेको छ । यस दिन लगानीकर्ताको सम्पत्ति रु. १८ अर्ब ४५ करोड घटेको छ । अघिल्लो दिन रु. १६ खर्ब ७ अर्ब रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यस दिन घटेर रु. १५ खर्ब ८९ अर्बमा सीमित भएको छ ।
१ हजार ३ सय ८० मा बलियो टेवा पाइरहेको नेप्से, आइतबार सो टेवाबिन्दुलाई तोडेर ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ । त्रसित केही लगानीकर्ताले कम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न थालेका छन् । निरन्तर ओरालो लागेपछि सेयरमूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको छ । सस्तोमा राम्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता बढेपछि यस दिन नेप्से ओरालो लागे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ ।
सोमबार १ सय ५१ कम्पनीको ४ हजार ८ सय २ पटकको कारोबारमा रु. ५५ करोड २४ लाख २० हजार २ सय ७० बराबरको १४ लाख ३८ हजार ८ सय ८६ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम ७७ प्रतिशत बढी हो । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन २ दशमलव ९३ अंक घटेर २ सय ८७ दशमलव ६५ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ३३ दशमलव ९० स्केलमा पुगेको छ । आरएसआई न्युट्रल जोनमा नै रहनुले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । यस दिन सो कम्पनीको रु. १० करोड ५६ लाखभन्दा बढीको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । ४२ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेका कारण लगानीकर्ता यस कम्पनीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
त्यसैगरी, प्रभु बैंकको रु. ५ करोड ९० लाख र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सको संस्थापक सेयर रु. ५ करोड ४५ लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको सेयरमूल्य यस दिन ४ दशमलव २४ प्रतिशत बढेको छ भने राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयरको मूल्य ८ दशमलव ६३ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ५१ कम्पनीमध्ये १९ कम्पनीको मात्र सेयरमूल्य बढेको छ भने १ सय ११ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २१ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
यस दिन सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । होटेल समूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक २ दशमलव ८३ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यसैगरी, माइक्रोफाइनान्स समूहको १ दशमलव ८४ प्रतिशत, बिमा समूहको १ दशमलव ७६ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको १ दशमलव ७ प्रतिशत, उत्पादनमूलक समूहको १ दशमलव ३२ प्रतिशत, अन्य समूहको १ दशमलव २ प्रतिशत, ट्रेडिङ समूहको शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत र विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत घटेको छ ।
नेपाल फाइनान्सको विशेष साधारणसभा
नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले फागुन २९ गते युनियन हाउस प्रा.लि. अनामनगरमा विशेष साधारणसभा आयोजना गर्ने भएको छ । सभामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहबाट र सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने विशेष प्रस्ताव रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिटीको अवितरित हकप्रद बाँडफाँट
नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले फागुन १३ गते अवितरित हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको छ । बैंकले माघ १५ गतेदेखि २६ गतेसम्म सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत खरिद आह्वान गरेको संस्थापक समूहको ३ लाख ७० हजार २ सय ४३ दशमलव १६ कित्ता सेयर बाँडफाँट गरेको हो । बाँडफाँटमा नपरेको सेयरबापतको रकम फागुन १६ गतेदेखि आवेदन फाराममा उल्लेख गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रकमान्तर गरिनेछ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
नेपाल लाइफको लाभांश
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ४२ प्रतिशत बोनस सेयर तथा प्रतिकित्ता रु. २८ दशमलव ५३ (बोनस तथा नगद लाभांशमा लाग्ने करसहित) वितरण गर्ने भएको छ । फागुन १३ गते सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बिमा समिति र अगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपश्चात् वितरण गरिनेछ ।
सोमबार नेप्सेले ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको १७ दशमलव ६९ प्रतिशत बोनस सेयरपछिको समायोजन मूल्य नेप्सेले रु. १ सय ९७ तोकेको छ । समायोजनका लागि कम्पनीको औसत आधार मूल्य रु. २ सय ७२ तोकिएको थियो ।
सोमबार नेप्सेमा ५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । यस दिन उन्नति माइक्रोफाइनान्सले सो सेयर सूचीकृत गरेको हो ।
बुटवल पावरको एफपिओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गरेको ४० लाख ८१ हजार कित्ता थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ)मा आवेदन दिने आज (फागुन १५ गते) अन्तिम दिन हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. एक सय अंकित मूल्यमा रु. ४ सय १ थप गरी प्रतिकित्ता रु. ५ सय १ मा सो सेयर निष्कासन गरेको थियो । माघ १५ गतेदेखि निष्कासन सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको सो एफपिओमा माघ २६ गते संगठित संस्थाले समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।